$38.00 $76.00 Manavotra 50% ($38.00)
Navy Blue / Small Navy Blue / Medium Navy Blue / Large Navy Blue / X-Large Navy Blue / 2XL Navy Blue / 3XL Navy Blue / 4XL Navy Blue / 5XL Dena mena / madinika Dena mena / mena Dena mena / lehibe Dena mena / X-Large Divay Red / 2XL Divay Red / 3XL Divay Red / 4XL Divay Red / 5XL Red / Small Red / Medium Red / Large Red / X-Large Red / 2XL Red / 3XL Red / 4XL Red / 5XL
Avelao hipi-maso ny endrikao ao amin'ny Dress Flower Maxi Dress. Ny lambondriaka marevaka, ny famolavolan-dalana ary ny loko marevaka dia manao io akanjo io-tsy maintsy ao anaty efitrano malalaka rehetra. Tena maro be, manao izany ho an'ny dia lavitra, mandeha mankany amin'ny valan-javaboary, hetsika ara-pianakaviana ary bebe kokoa. Misy amin'ny haben'ny kely hatramin'ny 5XL.
M ** ny A.
firehan-drivotra. tena lamaody
J ***** ny P.
tonga lafatra! Fandefasana haingana, mpivarotra lehibe
tena tsara! misaotra betsaka mpivarotra
M **** ny T.
Nandidy ny renim-pianakaviana, toy ny fitafiana reny rehetra!
Super! tonga lafatra! fitafiana mahafinaritra!
J *** y F.
A ** ny F.
E *** ny V.
Miezaha mafy loatra. Anarana iombonana amin'ny teny esperanto Fa tiako izany ary te hanao ny hanafahana azy. Manana lanja lehibe kokoa sy lava lava kokoa aho. 172-amin'ny kitrokely. Ny fitaovana dia malefaka, c / b, mahafinaritra ny vatana. pokontany lalina eo amin'ny tadiny. loko mafana sy mafana. Ny tsipika fohy, fa tsy sak, toy ny hita eo amin'ny sary. saingy tsy olana izany. Faly aho tamin'ny fividianana. Misaotra anao!
D *** ry S.
Tena faly amin'ny fividianana.
S *** ny K.
Misaotra anao ny zavatra rehetra dia tsara
Awesome dress! henjana noho ny sary!
K ****** ny K.
Velomy haingana! Tafatafa tao Moskoa ny andro 12. Dress cool! Nanandrana fanindroany indray, ny namana tk nahita sy nanontany azy ny baiko iray ihany!
Tena tsara tarehy sy tsara tarehy. Hanome lanja bebe kokoa amin'ny loko hafa aho. misaotra mpivarotra
D *** ny S.
Tsara tarehy, araka ny filazan'ny filazalaza! Tiako izany! Tsara kokoa amin'ny fehikibo eo amin'ny.
Nanapa-kevitra ny hanandrana style boho aho ary nividy ity akanjo ity. Raha tianao ny hamotsotra azy, dia manolo-kevitra aho handefa lehibe kokoa. Ny akanjo goavana, dia hividy bebe kokoa. Mitondra soa amin'ny fehikibo sy kavin'akanjomanga. Classy fitafy, ny lamba dia lamba rongony, miloko fa toa mahafinaritra !!! Ny paosy dia eo amin'ny sisin'ny tebiteby. Misaotra anao mpivarotra 5 kintana !!!!!)))))